Dirqaalaalee galmee HTML
Dirqaalaalee Barreessaa/saaphaphuu LibreOffice
Qindaa'inoota bu'uuraa galmeelee kan LibreOffice gita HTML tiin qindeessa.
Qindaa'inoota durtii waantota galmeelee kee keessaa fi miseensota foddaattif qindeessa.
Qindaa'inoota galmee barruu yookiin HTML keessatti ifteessa .
Duubee galmeelee HTML dhaaf ifteessa. Duubeen galmeelee HTML haaraa fi kan ati feetu lachuufuu , hanga duubee mataasaanii hin qindeeffannetti ni raawwata.
Title is: Dirqaalaalee galmee HTML